“Waa inaan bilowga horeba dilnaa Northern Ireland” – Mats Hummels oo talosiiyay ciyaartoyda Germany – Gool FM
“Waa inaan bilowga horeba dilnaa Northern Ireland” – Mats Hummels oo talosiiyay ciyaartoyda Germany
Liibaan Fantastic June 20, 2016
(Paris) 20 Juunyo 2016 Daafaca xulka qaranka Germany Mats Hummels ayaa ka hadlay kulanka habeen dambe ay laciyaari doonaan xulka qaranka N.Ireland oo u dagaalamaya inay u soo baxaan wareega 16-ka ee koobka euro 2016.
Mats Hummels ayaa ku taliyay in bilowga horeba ay dilaan xulka N.Ireland si aysan fursad ugu helin inay hamiyaan natiijo ay ka gaaraan xulkooda oo beegsanaya inay ku soo baxaan booska hore.
“Waan ognahay in hadii aan siino kalsooni inay isku dayi doonaan inay guul naga gaaraan” ayuu yiri Mats Hummels ka hor kulanka habeen dambe.
“Sidaas darteed waxaan isku dayi doonaa inaan ahaano kooxda fiican min bilowga hore ee ciyaarta si aysan u helin kalsooni”.
“Kooxaha reer Britain waxay leeyihiin qaab ciyaareed isku mid ah, Scotland iyo jamhuuriyada Ireland ayaan isreeb reebka kula soo ciyaarnay, waana aragnay awooda jir ahaanayd iyo mida caqli ahaanayd ee ay leeyihiin”.
“Haddii inabadan aad ka hortagto ciyaartoy waxaad baranaysaa wax walba oo iyaga ku saabsan, laakiin haatan waxaan u baahanahay inaan inbadan falanqayno”.
''Talyaanigu way ku guulaysan karaan Euro 2016'' - Capello
GOOGOOSKA: Slovakia vs England 0-0, Russia vs Wales 3-0 (Reee Britain oo soo wada baxay)